कर्जन्हा नगरपालिकाको मेयरमा केशब साहको पक्षमा माहोल, जसपामा देखियो जनलहर « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2022 May 10, 8:31 am
काठमाडौं, २७ बैशाख । यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाको नेृत्वमा जसपाबाट उम्मेद्धवारी दिएका केशबप्रसाद साहको पक्षमा राम्रो माहोल देखिएको छ । युवादेखि बयोवृद्धसम्मले साहलाई नै नेतृत्वमा आउनुपर्ने धारणा राखेको कर्जन्हाका युवा नेता अञ्जनी राईले जानकारी दिए ।
कर्जन्हा नगरपालिकामा मेयरमा साहले र उपमेयरमा लक्ष्मी श्रेष्ठ यादवले उम्मेद्धवारी दिएका हुन् । साह र श्रेष्ठ दुवैलाई बौद्धिक व्यक्तित्वको रुपमा चिनिन्छ । नगरवासीहरुको मन जित्नेगरि काम गर्ने वचन दिएका मेयरका उम्मेद्धवार साह यसअघि पनि नगरवासीहरुमा समाजसेवाका कारण लोकप्रिय छन् । नगरवासीहरुमा परेको दुःख र मर्काप्रति उनी सधैं गम्भीर बन्दै आएका छन् र सकेको सहयोग पनि पुर्याएका छन् ।
कर्जन्हा नगरको आमूल विकासको लागि उनी आफ्नो तर्फबाट सक्रिय रहँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार शून्य बनाउन र समृद्ध नगर बनाउन नै आफ्नो उम्मेद्धवारी भएको साहको प्रतिक्रिया छ । उनले नगरको विकास गर्नको लागि आफूसँग स्पष्ट भीजन रहेको पनि दाबी गरेका छन् । साहले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको एजेण्डा बोक्दै आएका छन् ।
कर्जन्हा प्रतिष्ठित व्यवसायीसमेत रहेका पूर्व सभासद डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोको गृहनगर पनि हो । जसपाका केन्द्रीय नेता महतोपनि साहलाई जिताउनको लागि घरदैलो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएका छन् । साहलाई जिताउनको लागि चुनावी कमाण्डरको रुपमा जसपाको मधेश प्रदेशकी कोषाध्यक्ष रेणु यादव, युवा नेताहरु अञ्जनी राई, लालकिशोर यादवलगायत सक्रिय छन् ।
साहले कर्जन्हाको आमूल परिवर्तन गर्न र समृद्ध नगर बनाउनको लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नको लागि सबै चोकमा डस्टबिनको व्यवस्था गर्नेदेखि सबै सडकहरु नालासहितको बनाउनेसम्म रहेका छन् । त्यस्तै, पहिचान भएका विपन्न तथा दलित परिवारलाई निःशुल्क शौचालय बनाईदिने पनि उनको घोषणा रहेको छ ।
साहले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा प्रत्येक चोक तथा बजारमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, नमूना मुसहर वस्ती बनाउने, मठ मन्दिरलगायत सार्वजनिक विश्रामस्थल निर्माण गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकलाई धार्मिकस्थलको भ्रमण गराउने रहेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक उन्नतीको लागि टोल टोलमा सहकारीको स्थापना गर्ने पनि उनको घोषणा रहेको छ ।
कर्जन्हामा पार्टीका उम्मेद्धवार विजयी गराउन अशोक राई र डा. वीरेन्द्र महतो फिल्डमा उत्रिए, यस्तो छ मेयरका उम्मेद्धवार साहको घोषणापत्र
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाइने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। चुनावका लागि आज राति १२ बजेपछि मौन अवधि सुरू हुनेछ। मौन अवधिमा चुनावी प्रचार गर्न रोक लगाइएको छ। यही वैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव हुँदैछ। निर्वाचन ऐनअनुसार मतदान हुनुभन्दा ४८ घन्टा पहिलेदेखि मौन अवधि सुरू गरिन्छ । शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म मतदानका लागि समय दिइएको छ।
कर्जन्हा नगरपालिकाको मुहार फेर्ने वाचासहित चुनावी मैदानमा केशब साह, डा. महतो पनि घरदैलोमा सहभागी